Ultrasonic Water Meter, China Ultrasonic Water Meter Abakhi, Suppliers, Factory - HNAC Technology Co., Ltd
Ikhaya>Umhlinzeki Wemikhiqizo>I-Metering Gauge
Imitha yamanzi ye-ultrasonic ithuthukiswa ngokusekelwe kumgomo wokulinganisa kwe-ultrasonic ye-propagation velocity umehluko indlela. Ithuluzi lihlanganisa ukulinganisa, ukubala nesibonisi ndawonye, ​​futhi lamukela ubuchwepheshe bokusebenzisa amandla amancane. Iseli elingu-1 lebhethri lingasetshenziswa iminyaka engaphezu kwengu-6, futhi lingabona ukukalwa okunembile kokugeleza okuncane okungu-0.01m³/h. Inomsebenzi wokulungisa nokusimamisa ukugeleza kwamanzi endaweni elinganisiwe yamanzi, engaphazanyiswa ukugeleza kwe-ripple kanye nesiphithiphithi endaweni yamanzi, okwenza ukulinganisa kunembile futhi kuthembekile; Phakathi naleso sikhathi, ithuluzi linezici zevolumu encane, ukuzinza okuhle kanye nekhono eliqinile lokulwa nokuphazamiseka.
Izici ezinemininingwane zemitha yamanzi ye-ultrasonic:
1. Ubuchwepheshe bokulinganisa ukugeleza kwe-Ultrasonic kwamukelwa ukuze kubone ukufakwa kwama-engeli amaningi, futhi ukukalwa kwensimbi akuthinteki, futhi ukulahlekelwa kwengcindezi yepayipi kuncishisiwe;
2. Isakhiwo sepayipi lemitha yamanzi e-Ultrasonic asinazo izingxenye ezihambayo zemishini, azigqoki ngomshini, ezivumela ukusetshenziswa isikhathi eside;
3. Amapayipi enziwe ngethusi elihambisana nemvelo, ukubumba okubomvu kanye nomshini womshini we-CNC;
4. Uma ipayipi lingenalutho noma isimo samanzi simile isikhathi eside, singangena kumsebenzi wokonga amandla ozenzakalelayo;
5. Nge-chip ye-E2PROM yokugcina idatha, ingakwazi ukulondoloza idatha yomlando izinyanga ezingu-8;
6. Ukonga idatha kwesikhathi sangempela: Idatha efana nenani lokugeleza elikhulayo kanye nesivinini kufanele ilondolozwe ngezikhathi ezithile.
7. Ngomsebenzi we-valve wokuhlanza iphutha okuzenzakalelayo, isikhumbuzi esidlulelwe yisikhathi, ukuvala i-valve okwedlule isikhathi, kungaqinisekisa izinga lokushaja kwamanzi, futhi uhlelo lokuphatha lungaba isilawuli kude;
8.Umjikelezo wesampula wesignali oklanyelwe ngokukhethekile uqinisekisa ukuthi isignali ngeke ihlanekezelwe ngaphansi kwezimo ezihlukene, ngaleyo ndlela iqinisekise imingcele yokulinganisa enembile nethembekile.